ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: November 2011
The World's Largest Limousine
ညလယ်သန်းကောင်ယံ၊ ဇိမ်ခံအထူးကားကြီး ကတော့ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးဇိမ်ခံအငှားယာဉ်ကြီးဖြစ်လာပါပြီ...
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ကြီးကို ကာလီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းအခြေစိုက်၊ လေးရာသီ အပန်းဖြေစခန်းကုမ္ပဏီ
Posted by Unknown | at 4:58 AM | 1 comments
Posted by Unknown | at 8:01 AM |0comments
မိုးရွာယင် သီချင်းသံစဉ်တွေမည်တဲ့ အိမ်ကြီး...
သည်အဆောက်အဦကြီးကတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ၊ ဒရက်စ်ဒင် အရပ်တွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး နူစတက်ဒ်ကွန်စ
သော်ဖ်ပက်ဆေ့ ခ်ျ လို့ အမည်တွင်ပါတယ်...
ထူးခြားချက်ကတော့ မိုးရွာတာနဲ့ တေးဂီတသံစဉ်တွေအလိုအလျောက်ထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 5:02 AM | 1 comments
Labels: photos: knowledge
ငါးနဲ့ ဖားနဲ့ လဲစရာမလိုတော့ ပြီ....
ကင်ညာနိုင်ငံ၊ ကီစူမူ ဒေသ၊ ကာနိုအရပ်မှ အမျိူးသမီးများဟာ "ငါးနဲ့ ခါးနဲ့ မလဲလှယ်ရေး" စီမံချက်အရပေး
အပ်ခဲ့ သည် ငါးဖမ်းလှေများကြောင့် သက်သာရာရနေခဲ့ ကြရပါပြီ....
ထိုငါးဖမ်းလှေများကို အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ဘ၀အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ရင်း
ကာရပ်တည်နေခြင်းမှကင်းလွတ်က ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေများရရှိစေနိုင်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ရန်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းမဟုတ်သည့် ကင်ညာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ နှင့် VIRED အပြည်
ဆိုင်ရာအဖွဲ့ တို့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ထောက်ပံ့ ပေးအပ်မည့် ငါးဖမ်းလှေခြောက်စီးဖြင့် ထိုဒေသရှိအ
မျိူးသမီးများဟာ ဗစ်တိုရီးယားရေကန်ကြီးအတွင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်တော့ မှာဖြစ်
လွန်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ညမ်ဝဲ ကမ်းခြေတွင်လှေများအား လွဲပြောင်းပေးခဲ့ ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ 
အပျော်တမ်းကူညီအားပေးသူ မိုက်ကယ်ဂယ်ဖ်ဖီ နှင့် ကီစူမူအရှေ့ မှ မာဘီယာမိုဂါကာ တို့ နှင့် အတူလာ
ရောက်ခဲ့ သည့် VIRED အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပါမောက္ခ အိုကီယိုအိုဝူအော က ယခု
ထောက်ပံ့ ခဲ့ သည် ငါးဖမ်းလှေများဟာ အမျိူးသမီးများအတွက် ငါးနှင့် ခါးအောက်ပိုင်း အလဲအလှယ်လုပ်
နေရခြင်းဘ၀မှ လွတ်မြောက်စေရန်ကူညီနိုင်လိမ့် မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ အသွေးအသားနှင့် အလဲအလှယ်နေရခြင်းကြောင့် ထိုရေကန်ပါတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွင်နေထိုင်
လျှက်ရှိသည့် အမျိူးသမီးများအတွင်း ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါကူးစက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာစေပါတယ်လို့ 
အိုဝူအော ကဆိုလိုက်ပြီး ဒီရေကန်ဒေသမှအမျိူးသမီးများအား ဘ၀ရပ်တည်နေနိုင်ရေးအတွက် ပိုမိုစွမ်း
ဆောင်နိုင်ရန် သူ၏အဖွဲ့ ဟာကင်ညာအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းကာငါးဖမ်းလှေများထောက်
ပံ့ ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ထိုသို့ လုပ်ဆောင်မှုက ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါကူးစက်ပြန့် ပွားမှုအား လျော့ နည်း
စေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် မကြာခဏဆိုသလိုပင် ငါးဖမ်းသမားများနှင့် ကြုံလျှင်ကြုံသလို အပေးအယူလုပ်
ကာ ငါးများယူရောင်းရကာ (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းအား) စွန့် စားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ ရပါတယ်လို့ 
နည်းငယ်သာဖြစ်တာမို့ ကျန်သည့် အမျိူးသမီးထုမှာ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိပဲ ဤကဲ့ သို့ စွန့် စားလုပ်ဆောင်
နေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ၎င်းက ၀မ်းနည်းစကားပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုစီမံချက် ဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖို့ အတွက်လည်း VIRED အဖွဲ့ အနေဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံ
ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ လည်းသူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
Women groups in Kano, Kisumu County, Kenya have benefitted from boats under the 'No Sex for Fish' initiative. The boats will provide them with an opportunity to generate income without engaging in risky relationships. The six boats delivered by an NGO, US Peace Corps Kenya in Collaboration with VIRED International will help the women to expedite fishing activities in the Lake Victoria.
Delivering the boats at Nyamware beach on Wednesday, the Director of VIRED International Prof Okeyo Owuor who was accompanied by Peace Corp volunteer in Kenya Michael Guelfe and Kisumu East DC Mabeya Mogaka said the boats will help stop the sex-for-fish trade.
Owuor noted that this has led to an increase in HIV infections especially among the women living in the Lake region. "Inabid to help empower the women in the Lake region, my organization in collaboration with the US Peace Corps Kenya resolved to provide the vessels to the women to help reduce chances of female along the Lake region attracting HIV infections," he added.
Often, women may have relationships with random fishermen to acquire fish commodities for sale and profit inarisky affair, he added. He lamented that the women have no choice because very few of them own boats, which he noted isakey resource of the fishing trade, he said. He said VIRED will provide logistical arrangements to ensure sustainability of the process.
Labels: news: allafrica.com
Rape victim's choice:12 yrs jail or marry rapist
ညီမ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ၏ယောကျာင်္းမှအဓမ္မပြုကျင့် ခြင်းခံခဲ့ ရသည့် အာဖဂန်အမျိူးသမီးတစ်ဦးကသူမအနေဖြင့် 
ထိုမုဒိန်းပြုကျင့် သူအားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုပါက (ကျခံနေဆဲထောင်ဒါဏ်အပြင်) နောက်ထပ်
ထောင်ထဲတွင် ၁၂ နှစ်ထပ်မံနေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိတ်လန့် အံ့ သြ၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေကိုထုတ်
ဂါလ်နက်ဇ်အမည်ရှိအဆိုပါအမျိူးသမီးဟာ သူမအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာပင် ထိုမုဒိန်းမှုအဖြစ်အပျက်ကို
တွန်းလှန်ကာကွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် (မအောင်မြင်ခဲ့ပဲမုဒိန်းကျင့် ခံရပြီးနောက်) တရားရုံးမှ အိမ်ထောင်
ရေးဖောက်ပြန်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ကာ ပြစ်ဒါဏ်ကျခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ယခုအခါသူမဟာ ကဘူးမြို့ ရှိ ဘာဒမ်ဘာ့ ဂ် အကျဉ်းထောင်တွင်မုဒိန်းကောင်ကြောင့် ရသည့် ရင်သွေးငယ်
ယခုထပ်မံ၍ပင်သူမအား အမျိူးသမီးတိုင်းပင်ထိုအခြေအနေ၊ရွေးချယ်မှုမျိူးဆိုပါက စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်
မည့် သူမအားအဓမ္မကျင့် ကြံခဲ့ သူနှင့် လက်ထပ်ကာအတူနေရန် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားခဲ့ ပြန်ပါတယ်...
အံ့ သြစရာမယုံကြည်နိုင်စွာပင် သူမကလည်း ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးငယ်အားပေါင်ပေါ်တွင်တင်ထားလျှက် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်အမျိူးသမီးများဝတ်ရုံရသည့် မျက်နှာ
ဖုံးအုပ်ကာလျှက်ပင်သူမကယခုကဲ့ သို့ ရွေးချယ်မှုကသာလျှင် သူမအနေဖြင့် အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်
နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်မရှိပဲ လိင်ဆက်ဆံမှုတည်းဟူသော သိက္ခာကျ၊ ဂုဏ်သရေမဲ့ ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်
မှာလည်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
သူမအတွက် ထိတ်လန့် ခြောက်ခြားဖွယ် ညအိပ်မက်ဆိုးများ စတင်ခဲ့့ရသည့် သူမဘ၀အားအကြီးအကျယ်
ပြောင်းလဲစေခဲ့ သော လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်နှစ်ကအဖြစ်အပျက်ကို သူမက ယခုလိုပြန်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဆေးရုံသို့ ခဏသွားခိုက် ထိုမုဒိန်းကောင် အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုသူဟာသံ
လည်း စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်၊ညစ်ပါတ်ပေရေနေခဲ့ ကြောင်း၊ သူကပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးမကိုပိတ်ခဲ့ လိုက်
ကြောင်း၊ သူမအော်ဟစ်ငိုယိုခဲ့ ပေမယ့် သူက ပါးစပ်ကိုလက်များဖြင့် ပိတ်ခဲ့ တယ်လို့ သူမက စီအန်အန် သ
တင်းဌာနရဲ့ အထူးတွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
Gulnaz is in Kabul's Badam Bagh jail, serving out her sentence with her rapist's child
ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာတတ်နိုင်သလောက်ဖုံကွယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါသေးတယ်..
သို့ သော်လည်း သူမဟာကိုယ်ဝန်ရှိသည့် လက္ခဏာများအဖြစ် နံနက်ပိုင်းမူးဝေအော့ အန်ခြင်းများဖြစ်ခဲ့ ပါ
သူမအား သနားကရုဏာဖြစ်ရမည့် အစား တရားရုံတင်စွဲဆိုကာပြစ်ဒါဏ်ချမျတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်းယခုကဲ့သို့ ထောင်မှလွတ်မြောက်ရန် ရေးချယ်နိုင်မည့် အခွင့် အလမ်းပေးသည့် အပေါ် ကံ
ကောင်းထောက်မမှုတစ်ရပ်အဖြစ် သူမက ၀မ်းသာကျေနပ်ခဲ့ ပါတယ်...
သူမကဲ့ သို့ အခြေအနေမျိူးဖြစ်ခဲ့ ကြရသည့်တစ်ခြားအမျိူးသမီးများဆိုလျှင် မိသားစု၊ ရပ်၇ွာအသိုင်းအ၀ိုင်း
တွင် အရှက်ရစေမှုဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံကြရပါတယ်...
ယခုတော့ သူမအား ကြံစည်ပြုကျင့် သူအားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းဖြင့် သူမ၏ဂုဏ်သိက္ခအားပြန်လည်အ
ဖတ်ဆယ်နိုင်မည့် အပြင် ကလေးငယ်အတွက်လည်း မိသားစုအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ခွင့် ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်..
"အဲဒီလူကိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်းကာ ထောင်ကနေလွတ်ပြီးဘ၀အသစ်တစ်ခုပြန်စချင်ပါသလားလို့ သူတို့ က
(အာဏာပိုင်တွေက) ကျွန်မကိုမေးခဲ့ ကြပါတယ်...
ကျွန်မသမီးလေးက အပြစ်မဲ့ တဲ့ သနားစရာကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်မဒီလိုအဖြစ်မျိူးနဲ့ ရင်သွေးငယ်
တစ်ယောက်ရခဲ့ လိမ့် မယ်လို့ ဘယ်သူကမျှော်လင့် ခဲ့ မိမှာလည်း...လူတွေကသမီးလေးမွေးပြီးယင် သူများ
ကိုပေးပစ်လိုက်ပါလားလို့ ပြောကြပါသေးတယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်မအအဒေါ်က ကျွန်မမှာအပြစ်မရှိကြောင်း
သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ သမီးငယ်လေးကို ဆက်ပြီးထားဖို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်...
ဂါလ်နက်ဇ်ကိုအဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ သည့် မုဒိန်းကောင်ကို မြို့ တစ်ဖက်ခြမ်းရှိအကျဉ်းထောင်မှာရှိနေတာကို စီ
အန်အန် သတင်းဌာနက ခြေရာခံရှာဖွေနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
သူမကိုအဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ တာကို ၎င်းကငြင်းဆိုခဲ့ ပြီး သူမအနေနှင့် ထောင်ကထွက်လာခဲ့ လျှင်လည်း ၇န်ရှာခံ
ရဖွယ်ရှိကြောင်းတော့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုသူမကိုရန်ရှာပြီးသတ်ပြစ်မှာကလည်း သူမရဲ့ မိသားစုဖြစ်ပြီး သူ့ ရဲ့ မိသားစုကတော့ ဘာမှ
လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ သူကဆက်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ဂါလ်နာက်ဇ် ရဲ့ ကြမ္မာငင်ခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကိုတော့ နိုင်ငံတစ်ကာက သိရှိ၊ သတိပြုမိသွားခဲ့ 
ဥရောပသမဂ္ဂ မှလည်း သူမနှင့် သူမကဲ့ သို့ အဖြစ်မျိူးကြုံတွေ့ ခဲ့ ရသည့် အခြားအမျိူးသမီးများအားတွေ့ ဆုံ
မေးမြန်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးရန်အဖွဲ့ တစ်ခုအား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ ခဲ့ပြီးနောက် ထို
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများမြင်တွေ့ ခဲ့ ရပြီးနောက်တွင်တော့ ထိုကိစ္စအားရပ်တန့် ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်....
၎င်းတို့ အနေဖြင့် ထိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်ခဲ့ သည့် အမျိူးသမီးများ၏ လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်
မိကာ သူမတို့ အပေါ် ရက်စက်စွာတုံ့ ပြန်မှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ အီးယူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးသူများကတော့ အီးယူအနေဖြင့် အာဖဂန်နိုင်ငံမှ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်း
(အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း) နှင့် ဆက်ဆံရေးမထိခိုက်စေခြင်းကအဓိကအကြောင်းအချက်ဖြစ်စေတယ်လို့ သံသ
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇတ်ကတော့ ဟုတ်နေတာပဲလို့ ဆိုရပေမယ့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဘယ်လောက်အရေး
ထိုဒေသ၊ ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံများက အမျိူးသမီးများရဲ့ ဘ၀ကတော့ တစ်ကယ့် ကိုရင်နင့် ကြေကွဲစရာပါ
Gulnaz was aged just 19 when she was convictedbyacourt of adultery, even though she tried to prevent the attack.
"He had filthy clothes on as he does metal and construction work," she told CNN in an exclusive interview. "He closed doors and windows. I started screaming, but he shut me up by putting his hands on my mouth," she said.
She received not sympathy but prosecution. But she appreciates she is lucky to getasecond chance. Many women in her position have been killed, for the shame such incidents bring on the community.
"I was asked if I wanted to startanew life by getting released, by marrying this man."
"My daughter isalittle innocent child. Who knew I would haveachild in this way. A lot of people told me that after your daughter's born give it to someone else, but my aunt told me to keep her as proof of my innocence."
He denied raping her, but agreed that she would bealikely target if she got out of jail. He insists that it will be her family, not his, that will kill her.
Posted by Unknown | at 3:35 AM |2comments
Faithful dog stays at masters grave
သခင် .... သေဆုံးသွားသည့် တိုင် သစ္စာရှိနေဆဲပါ...
This faithful dog has refused to leave his late master's graveside
လောက်သည့် သစ္စာရှိမှုအဖြစ် ၇ ရက်တိုင်တိုင်အစာ မစားရသည့်တိုင် ကွယ်လွန်သွားသည့်သခင်ဖြစ်သူ
အားမြုပ်နှံထားသည့်သင်္ချိူင်းမြေနေရာဘေတွင် မခွဲခွာပဲနေထိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
သခင်ဖြစ်၏သင်္ချိူင်းဂူသို့ ၁၄ နှစ်တိုင်တိုင်န့ စဉ်သွားရောက်ခဲ့ သောရာဇ၀င်တွင်လောက်သည့် အီဒင်ဘာ့ မှ
စကော့ တလန်တယ်ရီယာခွေးကလေး ဘော်ဘီကဲ့ သို့ ပင် တရုတ်နိုင်ငံမှ အ၀ါရောင်သစ္စာရှင်ခွေးကလေး
ဟာလည်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့် သူ့ ရဲ့ သခင်ရုပ်အလောင်းမြှုပ်နှံထားရာနေရာမှ မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်
ဒီလိုသစ္စာရှိတဲ့ ခွေးမျိူးကိုတော့ ဘယ်သူမဆို မွေးစားစောင့် ရှောက်ချင်ကြမှာပါပဲ...
ဒါပေမယ့် ခွေးကလေးကတော့ သခင်အဟောင်းပေါ်မှာ သံယောဇဉ်တွယ်နေဆဲ...
One villager adopted the dog and took him back to his house, but the dog escaped and rushed back to his late master's grave
ခွေးကလေးရဲ့ သခင်ဖြစ်သူ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ်ရှိ လောင်ပန်း ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ လျောင်နင်းပြည်နယ်၊
ပန်ကျားတွံ ရွာကလေးမှာ တဲကလေးတစ်လုံးနှင့် ခွေးကလေးကိုသာအဖော်ပြုကာတစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်
ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလအစောပိုင်းကပဲ သေဆုံးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
၇ ရက်တိုင်တိုင်အစာမစားပဲနေခဲ့ ပြီးနောက် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ ရွာသူ၊ရွာသားများက ခွေးကလေးအ
တွက် အစားအစာနှင့် သောက်ရေတို့ ကို သင်္ချိူင်းသို့ ယူဆောင်လာပေးကြပြီး ညအခါခွေးကလေး အိပ်စက်
နားခိုနိုင်ရန် ခွေးအိမ်ကလေးတစ်ခုဆောက်ပေးဖို့ ပင်စီစဉ်နေကြပါတယ်...
ရွာသားတစ်ဦးကတော့ ၎င်းအနေနှင့် ထိုခွေးကလေးကို မွေးစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့ အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်
သွားခဲ့ ပေမယ့် ခွေးကလေးဟာ ရုတ်တရက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး သေဆုံးသူ သခင်ရဲ့ မြေပုံရှိရာ
သို့ သာပြန်ပြေးလာခဲ့ ပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
His owner Lao Pan, who died aged 68, earlier this month, lived alone inalittle house in the village of Panjiatun in the Liaoning Province with just the dog for company.
Posted by Unknown | at 9:11 AM |2comments
Taiwanese man lifts 230 kgs with his 'iron crotch' to improve his health
အထူးပေါင်ကြား၊သံမဏိအတွင်းအားဖြင့် ကီလို ၂၃၀ ကို "မ" နိုင်သည့် ထိုင်ဝမ်အမျိူးသား...
အလုပ်ကြမ်းသမားအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက် နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ ရသည့် ယန်ယိုစင်အမည်ရှိထိုင်
၀မ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ ၉၉ ချိကုန်းစွမ်းအားသံမဏိအတွင်းအား စံပြယောကျာင်္း ဟုနာမည်ကျော်ကြား
သည့် အမျိူးသားများ လိင်အင်္ဂါဖြင့် ကီလိုရာနှင့် ချီကာလေးသည့် သံမဏိပြားများကို မနိုင်သည့် နည်းပညာ
ကိုလေ့ လာသင်ယူကျင့်ကြံတတ်မြောက်ခဲ့ ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာခဲ့ ပါတယ်...
ယန် ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကာယလုပ်သားအဖြစ် ဆင်းရဲပင်ပန်းသည့် အလုပ်များလုပ်ခဲ့ ရတာဖြစ်ပါ
လွန်ခဲ့ သည့် ဆယ်နှစ်ကတော့ အလုပ်လုပ်ပြီးတိုင်း သူ့ ခြေလက်များယောင်ကိုင်းကာနာကျင်လာခဲ့ ပြီး ထို
ရောဂါပျောက်စေမည့် ဆေးဝါးမတွေ့ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး...
ဒါကြောင့် သူဟာ လေ့ ကျင့် သူများကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမည့် ချိကုန်းနည်းပညာကို စတင်လေ့ လာ
သင်ယူ ကျင့် ကြံခဲ့ ပါတယ်...
အထူးသဖြင့် သူပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာရတာကလည်း ယောကျာင်္းပီပီစံချိန်မှီလေ့ ကျင့် ခန်းဖြစ်သည့်
အထူးချိကုန်း နည်းပညာကြောင့် ဖြစ်ပြီးထိုပညာရပ်ကို စတင်တည်ထောင်ပို့ ချသည့် ဆရာကြီး တူကျင်ရှန်း
နှင့် တွေ့ ဆုံပြီးနောက် လေ့ လာခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်...
လက်တွေ့ ပြသနိုင်တာမို့ မယုံမရှိပါနဲ့ ဗျာ...
ယန်က နေ့ စဉ်ကျင့် နေသည့် သင်ခန်းစာများကိုလည်း သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုပြသခဲ့ ပါတယ်...
ပထမပိုင်းမှာတော့ သူဟာ သံပြားအနည်းငယ်ကို သူ့ ရဲ့ အမျိူးသား မျိူးပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို အနီရောင်
အ၀တ်စနဲ့ ချီပြီး အသုံးပြုလေ့ ကျင့် ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..
အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလို့ ယုံကြည်တဲ့ အခါမှာတော့ သူဟာခြေနင်းခုံနှစ်ခုပေါ်ကိုတက်ကာ ခါးကုန်းပြီး ကီလို
၂၃၀ လေးသည့် သံပြားများကို သူ့ ရဲ့ အဓိကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုချည်ပြီးလေ့ ကျင့် ပါတော့ တယ်...
၎င်းနောက်တော့ သူဟာဖြေးညှင်းစွာ သံပြားများကိုမြေပြင်မှ စက္ကန့် ၃၀ ကြာအောင်မပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
သူငယ်ချင်းများကတော့ သူ့ ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက် ပျော်တစ်ပြုံးပြုံးမော်မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်...
အခုဆိုလျှင်သူဟာ ဆရာဖြစ်သူရဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွင် အထူးချွန်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်နေပြီမို့ အင်
ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ပို့ ချနေသည့် အဆင့် မြင့် သင်တန်းများတွင် သရုပ်ပြတင်ဆက်ရန် ဖိတ်ကြားထားခြင်းခံခဲ့ 
ချိကုန်းပညာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်၊ တရားထိုင်ရာတွင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိစေရန်အတွက်
အသက်ရှုခြင်းနှင့် ကိုယ်ကာယ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအတွက် လေ့ ကျင့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါနည်းစနစ်ဟာ တရုတ်တွေးခေါ်ပညာရပ်၏ စိတ်တန်ခိုးထက်မြက်ရေးဆိုင်ရာ သီအိုရီအတွေးအမြင်
များနှင့် နီးစပ်စွာပေါင်းစည်းဆက်စပ်နေပြီး မူကွဲ၊ နည်းစနစ်များလည်း ကွဲပြားခြားနားစွာရှိနေပါတယ်...
မကြာသေးခင်ကမှ ကမ္ဘာတစ်လွှားရုံတင်ပြသခဲ့ တဲ့ မစ္စတာဘင်းရဲ့ ဇတ်ကားသစ်မှာလည်း ဤကဲ့ သို့ လေ့ 
ကျင့် ပေါက်မြောက်သည့် အကြောင်းပါရှိခဲ့ တာအမှတ်ရမိပါသေးတယ်...
Yang You-sin,aTaiwanese worker who became ill after years of manual labour, regained his health by learning "99 Power Qigong," also known as "iron crotch," in which male students train their genitals to lift iron disks weighing hundreds of kilograms.
Yang has been doing heavy manual labour since he was young. Ten years ago, his limbs started to swell and become sore after working and he was not able to find any medicine that could relieve his pain. He started to look into qigong after he heard that it can improve practitioners' health. Yang says what improved his health was "iron crotch" qigong, which he studied after meeting the practice's founder, Tu Jin-sheng.
Yang showed his friends the results of his daily practice. First, he usesared cloth to tie several iron disks to his genitals to warm up. When he feels prepared, he steps onto two pedestals and crouches down to tie iron weights weighing 230kg to his penis. He then stands up slowly, lifting the iron disks off the ground for 30 seconds. His friends have been, for lack ofabetter word, fascinated by his perfoပrmance.
Posted by Unknown | at 2:09 AM | 1 comments
Labels: news: wantchinatimes.com
ပြည်သူ့ မေတ္တာခံယူခဲ့ ရရှာသည့် အိန္ဒိယ၀န်မင်း
ပြည်သူ့ ဆန္ဒအမှန်ဖော်ထုတ်ခဲ့ သည့် ဟာဘိန္ဒြာဆင်း အား အခင်းဖြစ်ပွားအပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှမေးမြန်းစဉ်...
Harvinder Singh being questioned by police after the attack
မြင့် တက်နေသည့် စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများနှင့် အကျင့် ပျက်လာဘ်စားမှုများအား သတိပြုအလေး
ထားစေရန်ရည်ရွယ်သည့် အနေဖြင့် ပြည်သူတစ်ဦးက လွန်ခဲ့ သည့် ကြာသပတေးနေ့ က အိန္ဒိယနိုင်ငံလယ်
ယာစိုက်ပျိူးရေးဝန်ကြီးအား အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် ပါးရိုက်ခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကွန်ဂရက်ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ရှာရက်ဒ်ပါဝါ ဟာ နိုင်ငံရေးဆိုင်
ရာ အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် သတင်းထောက်များအား စကားပြောဆိုနေစဉ် အဆိုပါအမျိူးသားက ရန်ပြုခဲ့ 
ဒီတစ်ခါတော့ ပါးပဲရိုက်လိုက်တယ်...နောက်တစ်ခါဆို ဓါးနဲ့ ပါထိုးမယ်လို့ များရည်ညွှန်းလေသလားပဲ...
This combo pictures shows the slapped Sharad Pawar (up) and Harvinder Singh brandishing his knife after slapping the ministe
၀န်ကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုတစ်ခဏတွင်ဟန်ချက်ပျက်သွားခဲ့ သော်လည်း အိနြေ္ဒပြန်ဆယ်နိုင်လိုက်ကာစောင့်
ဆိုင်းနေသည့် ၎င်း၏ကားဆီသို့ ဆက်လက်လျှောက်သွားခဲ့ ပါတယ်...
ပါရိုက်ခဲ့ သူမှာ နောက်ပိုင်းတွင် ဟာဘိန္ဒြာဆင်း ဟုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ ရပြီးနောက် အသက် ၃၀ အတွင်းရှိ သယ်
ယူပို့ ဆောင်ရေးယာဉ် ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြင့် တက်
မှုနှင့် အကျင့် ပျက်လာဘ်စားမှုဆိုင်ရာကြွေးကြော်သံများအော်ဟစ်ခဲ့ သည်ဟု ရုပ်သံသတင်းများက ဖော်ပြ
ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ပြသခဲ့ သည့် ပြကွက်တွင် အဆိုပါအမျိူးသားဟာ ဆစ်လူမျိူးများကိုင်ဆောင်လေ့ ရှိ
သည့် ဂေါ်ရခါးဓါးကောက်အား ဝှေ့ ယမ်းပြသခဲ့ သည်ကိုလည်းတွေ့ ရှိရပြီး ၎င်းအား လုံခြုံရေးအရာရှိများ
နှင့် ဝန်ကြီးမင်း ပါဝါ၏လက်ထောက်များက ဆွဲငင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ ပါတယ်....
" ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီဝန်ကြီးကို ပါးရိုက်ခဲ့ ရသလဲဆိုတာ မသိဘူးလား...အများပြည်သူတွေအနေဲ့ စိတ်
ဒုက္ခရောက် အခက်အခဲဖြစ်နေကြရပါတယ်...အဲဒီအတွက်ဒီလိုလုပ်တာ ကျွန်တော်မှားသလားဗျာ...
ဒီပွဲကိုလာပြီး ဒီဝန်ကြီးကိုပါး၇ိုက်ဖို့ ကျွန်တော်စီစဉ်အကွက်ချလာခဲ့ တာပါ....အဲဒီဝန်ကြီးတွေအားလုံး လာဘ်
စားနေကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ..." လို့ သူက အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဟာဘိန္ဒြာဆင်း အားရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ ပါတယ်....
ကြီးကြီးမားမားဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ ခြင်းမရှိသည့် ဝန်ကြီးမင်း ပါဝါအား ၇န်ပြုတိုက်ခိုက်၊ ပါးရိုက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် 
၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်သည့် မဟာရပ်ရှတ္တရာ ပြည်နယ်တွင် အပြင်းအထန်ဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးသမားများအား ရန်ပြုတိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုအဖြစ်များလာနေခဲ့ ပါတယ်...
၀န်ကြီးမင်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲများအား စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသည့် ပြည်သူလူထု
မှ ဖိနပ်များဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်း၊ ရုံးခန်းများအား မွှေနှောက်ဖျက်ဆီးခြင်းများ ရှိခဲ့ သော်လည်း ၀န်ကြီးတစ်ဦး
အား အများပြည်သူရှေ့ မှောက်တွင် ပါးရိုက်ခဲ့ ခြင်းမှာ ယခုအကြိမ်သည်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ ဖြစ်ပျက်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အကျင့် ပျက်လာဘ်စားမှုများ၊ အမှန်တစ်
ကယ် တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ စွာ ပြုကျင့် ခံရခြင်း သို့ မဟုတ် ထိုကဲ့ သို့ ပြုကျင့် ခံရသည်ဟု ပြည်သူများအနေ
ဖြင့် ထင်မြင်ခံစားရခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်....
ကျူပ်ထက်သိတဲ့ သူတောင် ကျူပ်လောက် မသိဘူးဆိုတဲ့ ဝန်မင်းလည်း အဲဒီလို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူနဲ့ တွေ့ စေ
A man slapped India's Agriculture Minister in the face on Thursday, apparently to draw attention to rising food prices and corruption.
Sharad Pawar, 71, who is also National Congress Party chief was talking to reporters atapolitical function when the man attacked him.
The minister lost his balance foramoment but regained composure after the assault, moved towards his waiting car.
TV news reports said the attacker, later identified as Harvinder Singh,atransport operator in his 30's, shouted slogans about inflated food prices and graft.
Television footage also showed him brandishingakirpan,atraditional Sikh knife as he was dragged away by security officials and Pawar's aides.
"Don't you know why I hit him? The common man is distressed. Am I wrong?"
"I came planned to the event to slap the minister. All of them are corrupt," he shouted.
Harvinder Singh was detained by police.
The attack on Pawar, who was not seriously injured, sparked protests in his home state of Maharashtra.
Assaults on politicians have become increasingly common in India.
Ministers and other officials have had shoes thrown at them and their offices ransacked by angry citizens but this is the first case whereaminister had been slapped in public.
Posted by Unknown | at 12:21 AM | 1 comments
Labels: news:source agencies
တို့ ကျောင်းသားတို့ အကြိုက်ကိုယ်စားလှယ်တော် ....
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်း ဖူဒန် တက္ကသိုလ်တွင် မကြာသေးမှီက အခြေခံဒေသဆိုင်ရာရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ
လေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ ရာမှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ချမှတ်ပေးသည့် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်အ
မည်စာရင်းအား မကျေနပ်သောကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုမှ သပိတ်မှောက်ကန့် ကွက်ဆန့် 
တစ်ချိူ့ သောကျောင်းသားများကတော့၎င်းတို့ ၏ဆန္ဒမဲများ ပယ်မဲဖြစ်စေရန်အတွက်မဲပေးကဒ်ပြားများပေါ်
တွင် ဂျပန်အချစ်အကြမ်းအပြာဇတ်ကားသရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဆိုရာအွိုင်း၏အမည်အား ထည့် သွင်းရေး
ရှန်ဟိုင်းယန်ပုဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ ကွန်ကရက်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲတွင် ဖူဒန်းတက္ကသိုလ်
မှ ကျောင်းသား၊ကျာင်းသူအများအပြား မဲမပေးပဲကန့် ကွက်ခဲ့ ကြတယ်လို့ ဟောင်ကောင်သတင်းဌာနများ
သားသားတို့ အကြိုက်...ဆိုရာအွိုင်း ကမှ လွှတ်တော်ထဲမှာ လုပ်ပြနိုင်ပါလိမ့် ဦးမယ်...
Students chose to vote for Japanese porn actress Sora Aoi instead of their officially designated candidates
မဲပေးကဒ်ပြားများပေါ်တွင်ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင့် အဆိုတော် အက်ဒီဆင်ချန်း နှင့် အစ်ကို
ကာလသများအသည်းစွဲအကြိုက် ဆိုရာအွိုင်း တို့ ရဲ့ အမည်များကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက အဆိုပါ
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ပျက်ပြယ်စေရန်၊ တရားမ၀င်စေ ရန် နှောက်ယှက်ကန့် ကွက်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မကျေနပ်မှုကို ဒီနည်းနဲ့ သာပြသနိုင်တမို့ ယခုလိုပြုလုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..." လို့ အငယ်
သက်ဆိုင်ရာမှ ချမှတ်ပေးသည့် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့ ၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်၊ ဦးတည်
ချက်များအား တိတိကျကျရေရေရာရာမသိရှိကြရပါဘူးလို့ လည်းအဆိုပါကျောင်းသားကဆိုပါတယ်...
" ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုက အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ရယ်စရာကြီးကိုဖြစ်နေတာပါပဲ...ဆိုရာ လေးနဲ့ အက်ဒီဆင်
တို့ ကမှ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲထက် လူပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာခံကြရပါသေးတယ်..." လို့ ၎င်းကဆက်ပြောခဲ့ ပါ
ယခင်အစောပိုင်းက ဆန္ဒမဲပေးမှုတစ်ခုမှာလည်း ကွမ်ကျိူးတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများဟာ လူပျက်ကြီး
သူသော ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင် Sneak Attack မှ ဇတ်လိုက်တစ်ဦး ( လျန်ရှောင်တန်း ) အား ၎င်းတို့ ရွေး
ချယ်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသရုပ်ဆောင်ဟာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးထဲတွင် နံပါတ်လေး ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်...
Shanghai's Fudan University recently heldaPeople's Congress primary election, which was boycotted by the majority of students as they were dissatisfied with the officially designated candidates.
Some students even chose to fill in the name of Japanese adult movie actress Sora Aoi in the candidate's column on the ballot to invalidate their vote. The school was eventually forced to re-run the election.
According to Hong Kong media reports, as too many students abstained from voting in Fudan University's recent elections for Shanghai Yangpu District People's Congress, two officially designated candidates were unable to getamajority vote.
The prank played by college students filling in the names of Sora Aoi and Hong Kong actor and singer Edison Chen and Sora Aoi's name on their ballots invalidated the election.
"We can only express our dissatisfaction in this way," saidajunior students at the university, who said the two officially designated candidates and their political aims were both all unclear."
"The election itself is funny, even Sora Aoi and Edison Chen are more influential than the election."
In an earlier vote in Guangzhou's University City, students entered the popular character "Laughing Brother" (Liangxiao Tang) from the Hong Kong drama Sneak Attack as their desired candidate.
He placed fourth among all the candidates.
Posted by Unknown | at 11:44 PM |0comments
Labels: News Source: wantchinatimes.com
လည်ချောင်းထဲရောက်နေတဲ့ မျှော့ ...
မယုံကြည်နိုင်စရာပင် မည်သို့ မျှထင်မှတ်ဖွယ်မရှိစွာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကောင်လေးတစ်ယောက်၏
လည်ချောင်း၊ လေပြွန်အတွင်းမှ ၄ လက်မ အရှည်ရှိ မျှော့ တစ်ကောင်အား တွေ့ ရှိခဲ့ ကြရပါတယ်...
လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်လခန့် မှစပြီး တောင်ကျားယွမ် တစ်ယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ကာ သူ့ ရဲ့ အသံမှာလည်း
အက်ကွဲရှတသည့် အသံဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်...
သူ၏မိခင်ဖြစ်သူက သူ့ အားအအေးမိသည်ဟုထင်ကာဆးတိုက်ခဲ့ သော်လည်း သက်သာပျောက်ကင်းခြင်း
သို့ နှင့် ထိုကောင်လေးမှာ ပိန်ချူံးချိနဲ့ လာခဲ့ ရပါတော့ တယ်...နောက်ဆုံးအသက်ရှုရတာပင် ခက်ခဲပင်ပန်း
လာခဲ့ ရတာမို့ မိသားစုမှ သူ့ အားဆေး၇ုံသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါတော့ တယ်...
ထိုအခါမှပင် ၎င်း၏လေပြွန်အတွင်း မျှော့ တစ်ကောင်အသက်ရှုင်လျှက်ရှိနေသည်ကိုဆရာဝန်များမှတွေ့ ရှိ
ခဲ့ ကြပါတော့ တယ်...
ထိုလူငယ်လေး၏လည်ချောင်းထဲတွင်ရှိသည့် မျှော့ အား လွန်ခဲ့ သည့် သီတင်းပါတ်နှောင်းပိုင်းက တရုတ်
နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်ပြည်နယ်၊ နန်အန်းဒေသ၊ ယီဘင်မြို့ မှ အမှတ် ၂ ယီဘင်ဆေးရုံ္မ္ပတွင်ခွဲ
စိတ်ကုသကာ ဖယ်ရှားပေးခဲ့ ပါတယ်...
သွေးစုပ်ကာအသက်ရှင်နေသည့် မျှော့ ဟာ ခွဲစိတ်ရန်ထိုးပေးခဲ့ သည့်မေ့ ဆေး၊ ထုံဆေး အားကြံ့ ကြံ့ ခံ
ကာ လူငယ်လေး၏ လေပြွန်ထဲတွင် ရွေ့ လျားသွားလာကာ လည်ချောင်းမှထွက်ပေါ်ဖယ်ရှားခဲ့ ရခြင်းဖြစ်
ယခုဖြစ်ရပ်ဟာ အလွန့် အလွန်ရှားပါးသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မျှော့ များအနေဖြင့် လူ့ ကိုယ်အ
တွင်း သတိမပြုမိပဲ ၀င်ရောက်သွားနိုင်ခြင်းဟာလည်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပါပဲ လို့ အဆိုပါခွဲစိတ်ကုသမှုအား အဓိက
ဦးဆောင်ခဲ့ သည့် ဆရာဝန် ဒေါက်တာချန်ဘင်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မျှော့ များဟာ လူ့ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်း သို့ တည်းမဟုတ် လည်ချောင်းအတွင်းမှာ အသက်ရှင်နေနိုင်ကြ
ပါတယ် လို့ ဒေါက်တာချန်း ကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
မျှော့ များဟာ မြစ်များ၊ချောင်းများ၊ လယ်ကွင်းများ၊ ရေအိုင်များ စသည့် ရေချိူအရပ်ဒေသများတွင် ပေါက်
ထိုလူငယ်လေးဟာ လယ်ကွင်းထဲတွင်အလုပ်လုပ်နေတုံး မျှော့ ပါရှိသည့် ချောင်းရေကို သောက်သုံးခဲ့ တာ
ဖြစ်ရမယ်ဟု ဖခင်ဖြစ်သူ တောင်ချွမ်ဟွား ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကလည်း ချောင်းတွေ၊ ကန်တွေ၊ အိုင်တွေမှာ ရေကူးဆော့ ကစားခဲ့ လေ့ ရှိတာမို့ လူ
ကြီးတွေက စအိုထဲကနေမျှော့ ဝင်ပြီးဗိုက်ထဲမှာမျှော့ တွေပေါက်ပွားနေခဲ့ တဲ့ ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့ ဖူးတယ်ဆိုပြီး
ချောက် ပြောခဲ့ ဖူးပါတယ်....
Posted by Unknown | at 10:46 PM |0comments
Labels: news: 3news.co.nz
ရဲကားပေါ်မှပင်မဆင်းပဲ ဇိမ်ခံကာဖိနပ်တိုက်ခံခဲ့ သောရဲအားဝိုင်း
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှ ရဲကားပေါ်တွင်ထိုင်ကာခြေထောက်သာအပြင်သို့ ထုတ်ပြီး ဖိနပ်
အတိုက်ခံခဲ့ သည့် ဓါတ်ပုံတစ်ခုတရုတ်နိုင်ငံအင်တာနက်ပေါ်တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့
ပြီး ကြည့် ရှုဝေဖန်မှုများအပြင်းအထန်ပေါ်ပေါက်လျှက်ရှိပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဖူကျန့် ပြည်နယ်၊ နန်ပင်းမြို့ လိုင်စင်နံပါတ်တံဆိပ်တပ်ထားသည့် ရဲကားတစ်စင်းဟာ
ကျီကျန်းပြည်နယ်၊ ကျွီကျိူးမြို့ လမ်းဘေးတွင်ရပ်ထားကာ အဆိုပါကားထဲမှခြေထောက်တစ်ဖက်ထွက်
ကျနေခဲ့ ပြီး အသက်လေးဆယ်ကျော်၊ငါးဆယ်အတွင်း ဖိနပ်တိုက်သူအမျိူးသမီးတစ်ဦးက ကားတံခါး
ရှေ့ တွင်ထိုင်ကာ ခေါင်းငုံ့ ပြီးဖိနပ်တိုက်နေခဲ့ သည့် ဓါတ်ပုံပေါ်ထွက်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါဓါတ်ပုံကြောင့် ဖိနပ်တိုက်ခံခဲ့ သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်ဟာ အလွန်ဟိတ်ဟန်ကြီးသူ၊ လူပါးဝသူ ဖြစ်
တယ်လို့ အင်တာနက်သုံးစွဲများက ရှုံ့ ချပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ ကြပြီး နန်ပင်း ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးရာဌာနရဲ့ 
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူကတော့ ထိုကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်
လို့ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 9:24 AM |0comments
Labels: news photos: knowledge
ရေအိတ်သဲအိတ်တင်မကဆူပါဂလူး၊ဘိလပ်မြေတို့ ဖြင့် 
အမျိူးသမီးတစ်ဦး၏ နောက်ပိုင်းအလှ၊ တင်သားများအားကြီးမားတောင့် တင်းပြီး ပုရိသများသမင်လည်
ပြန်လှည့် ကြည့် စေလောက်သည့် စွဲဆောင်မှုပုံပန်းရှိစေရန် ဘိလပ်မြေမှုန့် ၊ ဆူပါကော်၊ တာယာလေထိုး
ကျွတ်ဖာယာတွင်သုံးသည့် လေလုံသားရေပြားများ ထည့် သွင်းကာ အလှပြုပြင်ပေးသည့် ဆရာဝန်အတု
အယောင် အမျိူးသမီးတစ်ဦးအားဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်...
သူမကိုယ်တိုင်(တစ်ကယ်တော့ သူကိုယ်တိုင်ပေါ့ ဗျာ) အရိုက်ခံခဲ့ သည့်ဓါတ်ပုံထဲတွင် ထိုကဲ့ သို့ နောက်ပိုင်း
အလှကြီးမားခန့် ညာစေရန်ခွဲစိတ်ထည့် သွင်းပြုပြင်ထားသည့် အလှဖန်တီးရှင်တစ်ဖြစ်လဲ လိင်ပြောင်းခွဲ
စိတ်ကာ မိန်းမအသွင်ပြောင်းလဲထားသည့် အိုနီးရွန်မောရစ် ဟာ အသက်သေစေနိုင်သည့် အဆိုပါ ဓါတ်
ပစ္စည်းများအား အနည်းဆုံး အမျိူးသမီးတစ်ဦးအား ထည့် သွင်းထိုးနှံပေးခဲ့ တယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ ရပါတယ်...
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိတစ်ကယ့် အမျိူးသမီးတစ်ဦးနှင့် မခြားတူသည့် အလှဖန်တီးရှင်အမျိူးသားဟာ ၂၀၁၀
ခုနှစ်၊ မေလ ကဖြစ်ပွားသည့်အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ယမန်နေ့ က ဖလော်ရီဒါတွင် အဖမ်းခံခဲ့ ရတာ
ဒီလောက်အထိ ပုံပျက်ပန်းပျက်ကြီးထွားနေမှတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ကဟုတ်က ဓါတ်ပစ္စည်းတွေထည့် 
ပြီး ပြုပြင်ဖန်တီးထားလို့ ပေါ့ ...
မောရစ်စ် ဟာ အမည်မဖော်နိုင်သေးသည့် အလိမ်အညာခံရသူအားထိုခွဲစိတ်ကုသ အလှပြုပြင်ရန်နှင့် ပါတ်
သက်ပြီး ပထမဦးဆုံးအယင်တွေ့ ဆုံခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ မီယာမီ ဥယျာဉ်ခြံအရပ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ တပ်ကြပ်ကြီး
၎င်းတို့ နှစ်ဦးဟာ ထိုအလှပြုပြင်ခွဲစိတ်ခံယူဖို့ အတွက် ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဖြင့် ဈေးတည့် သွားကြပါတယ်လို့ 
ခွဲစိတ်ကုသ၊အလှပြုပြင်ခံသူအား ဘိလပ်မြေများ၊ သဘာဝဆီများနှင့်လေထိုးကျွတ်ဖါသည့် တာယာအပိုင်း
အစများပါဝင်သည့် ဓါတ်ပစ္စည်းများအား အကြိမ်ကြိမ် ( ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ) ထိုးနှံပေးခဲ့ ပါတယ်...
ခွဲစိတ်ထားသည့်ဒါဏ်ရာများအားလည်း ဆူပါဂလူး ( အပြင်းစားကော်များ) ဖြင့် ကပ်ကာပြန်ချူပ်ပေးခဲ့ ပါ
ဒါကြောင့် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီးနောက်များမကြာမှီပင် သူမဟာ ရောဂါဝေဒနာမျိူးစုံခံစားလာခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
" သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမဟာ အပြင်းအထန်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာများကို ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းအပါအ၀င် တစ်
ကိုယ်လုံးခံစားခဲ့ ရတာမို့ တစ်စုံတစ်ခုတော့ မှားယွင်းခဲ့ ပြီဆိုတာ သူမသိရှိလာခဲ့ ပါတော့ တယ်..." ဟု ဘမ်
ဖို့ က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါအမျိူးသမီးဟာ တမ်ပါအထွေထွေဆေးရုံကြီးသို့ မလာရောက်မှ ဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံနှစ်ခုသို့ သွား
ရောက်ပြသကာ ကုသမှုခံယူခဲ့ ပါသေးတယ်...
သူမ၏ဒါဏ်ရာများတွင်ဆေးမတိုးသည့် ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့ နှံ့ နေခဲ့ ပြီး အဆုပ်အအေးမိရောဂါလည်းခံစား
နေခဲ့ ရတာဖြစ်ပေမယ့် သူမအနေဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံစတင်ဖြစ်ခဲ့ သည်ကိုပြောပြဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...
ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များကတော့ ထိုဖြစ်ရပ်ဟာ တရားဝင်ဆေးကုသခွင့် လိုင်စင်မရှိသူတစ်ဦးရဲ့ လက်ချက်
ဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ ကြတာမို့ ဖလော်ရီဒါကျန်းမာရေးဌာနကို သတင်းပို့ တိုင်ကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါ
သို့ သော်လည်း ထိုဖြစ်ရပ်အားစတင်စုံစမ်းချိန်မှာတော့ အလိမ်အညာခံရသူဟာထိုဒေသမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့ 
မောရစ်စ် အားနောက်ဆုံးတွင် မြောက်လိုဒါဒေးအရပ်တွင် ၂၀၁၁ ခု၊မတ်လမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ မိတာဖြစ်ပါတယ်..
၎င်းအား လိုင်စင်မရှိပဲ၊တရားမ၀င်ဆေးကုခြင်း၊ထိခိုက်အနာတရဖြစ်စေခြင်းများဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ယခုဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ဖြစ်ရပ်မှာ အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏နောက်ပိုင်းအလှ ဖွံ့ ထွား၊တင့် ကားစေ
ရန် တရားမ၀င်၊ ဆရာဝန်အတုများဖြင့် တိတ်တိတ်ပုန်း ခွဲစိတ်ကုသ၊ ပြုပြင်ကြရာမှ မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်
အောက်ခြေခိုင်မာတောင့် တင်းအောင် ဘိလပ်မြေသုံးရပါတယ်...
ုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်း လန်ဒန်မြုို့ မှ အသက် ၂၀အရွယ်ရှိ ဗြိတိသျှလူမျိူးကျောင်းသူလေး ကလော်
ဒီယာ အဒီရိုတီမီ တစ်ယောက် ဖီလာဒဲဖီးယား ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုအတွင်း ယခုကဲ့ သို့ ဖွံ့ ထွား၊စွင့် ကားစေ
ရန် အလှပြုပြင်မှုအတွက် ဆေးထိုးခံခဲ့ ရမှ သေဆုံးခဲ့ ရပါတယ်...
ဇန်န၀ါရီလ တုံးကလည်း နယူယောက်မြို့ မှ တရားဝင်လိုင်စင်မရှိပဲ ခွဲစိတ်ပြုပြင်သူ ၀ှါလက်စ်ကာ ကက်စ်တီ
လို အား သူမနေအိမ်တွင် အမျိူးသမီးများအား ရင်သားနှင့် တင်သားများ ကြီးမားစေရန်အတွက် ရေအိတ်၊
သဲအိတ် စီလီကွန်ဖျော်ရည်များဖြင့် ဆေးထိုးပေးခဲ့ မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်...
၂၀၁၀ ခုနှစ် ကလည်း အန်နာဂျိူ့ စ်ဖာဆီဗီလာ အမည်ရှိ မီယာမီ မှအမျိူးသမီးတစ်ဦးအားလည်း အလားတူ
ပြလုပ်ပေးခဲ့ သဖြင့် သူမထံလာရောက် ကုသူပြုပြင်ခံယူသူတစ်ဦးဟာ ရောဂါဝေဒနာမျိူးစုံဖြင့် အရေးပေါ်
အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ ရသ ဖြင့် ဖမ်းဆီးကာတရားစွဲဆိုခံခဲ့ ရပါတယ်...
နာမည်ကျော်အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ဂျင်နီဖာလိုပက်စ်၊ အဆိုတော် ဘီယွန်စေ၊ အဆိုတော် နစ်ကီမီနာ့ဂ်ျ
တို့ ကဲ့ သို့ အမျိူးသမီးများ နောက်ပိုင်းအလှ ၀င့် ကြွား၊ တင့် ကား စေရန်ခွဲစိတ်ပြုပြင် ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံ
ဟစ်ဟော့ ချစ်သူ ယဉ်ကျေးမှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ပြီးနောက် အမျိူးသမီးများ၏ နောက်ပိုင်းအလှ ကြွားကြွား
ရွားရွားရှိမှုဟာ အမျိူးသမီးငယ်များအကြားတွင် ဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် လူကြိုက်များလာခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါ
သို့ သော်လည်း တရားမ၀င်၊ လိုင်စင်မရှိသည့် နေရာများ၊ လူများထံတွင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်၊ ကုသခံခြင်းဟာ ကံ
စမ်းသလို အလွန်အန္တရယ်ကြီးလှပါတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကဆိုပါတယ်...
အရှိအရှိအတိုင်းမကျေနပ်နိုင်ပဲ လှချင်ပချင်ကြွားချင်ဝါချင်လို့ အလှပြုပြင်ကာမှ ကြွေလွင့် ရတတ်တယ်...
Posted by Unknown | at 6:43 PM | 1 comments
မနုဿတဘာဝေါဒုလ္လဘော... လူ့ အဖြစ်ကိုရခဲခြင်း..
လူ့ အဖြစ်ဆိုတာရခဲတယ်လို့ တော့ ဆိုကြလေရဲ့ ....
အခုအဲဒီအဆိုကိုထောက်ခံမယ့် တွက်ချက်မှုမျိူးဂရပ်ဖစ်နဲ့ တင်ပြထားတာကြည့် နိုင်ပါတယ်...
Posted by Unknown | at 8:34 AM |0comments
မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းလဲ့ ပြာရီတွေ...ခဏလောက်တော့ သိမ်းထားပေးပါ...
အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့ မှသဘောထားတင်းမာကာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများကြီးစိုးသည့် ဆော်ဒီအာရေဘီးယားနိုင်ငံတွင် စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှသည့် မျက်လုံးပိုင်ရှင်အမျိူးသမီးများအား (ဦးခေါင်းမှခြေဖျားအထိ မျက်လုံးပေါ်ရုံသာ
၀တ်စုံဆင်မြန်းထားရသည့်တိုင်)ထိုမျက်လုံးများကိုအတင်းအကြပ်ဖုံးကွယ်စေလိမ့် ဦးမည်ဟု စာရိတ္တကြံ့ ခိုင်
ရေးနှင့် ဒုစရိုက်မှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ ၏ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဟာအီရယ်ဒေသမှ ထိုအဖွဲ့ ၏ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ရှိတ်မော့ လက်ဘ်အယ်နဘက် က ကော်မတီအနေနှင့် 
ဆန့် ကျင့် ဖက်ပုရိသများအား ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းသည့် မျက်လုံးများပိုင်ရှင်အမျိူးသမီးများအား ရပ်တန့် စေ
ကာ ထိုမျက်လုံးများအားချက်ချင်းပင် ဖုံးကွယ်စေဖို့ အမိန့် ပေးနိုင်သည့် အခွင့် အရေးရှိကြောင်းပြောကြား
ရင်ကိုဒိန်းကနဲဖြစ်စေမယ့် မင်းရဲ့ အကြည့် တွေခဏလောက်တော့ ဖုံးကွယ်ထားပေးပါ...
ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင် အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်အပြင်ထွက်ပါက ဆံပင်ဦးခေါင်းအပါအ၀င် မျက်နှာများပါ
ဖုံးလွမ်းကာရံထားသည့် အနက်ရောင်ဝတ်စုံ အားအတင်းအကြပ်ဝတ်ဆင်စေခဲ့ ပါတယ်...
အကယ်၍မလိုက်နာပါက ဒါဏ်ငွေအပြင် တစ်ခါတရံ အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင်ပါ ကြိမ်ဒါဏ်ပေးလေ့ ရှိပါ
အဆိုပါကြေငြာချက်မှာ ဆော်ဒီအမျိူးသားတစ်ဦးက ၎င်း၏ဇနီးသည်အား သူမမျက်လုံးများကိုဖုံးအုပ်ကာ
ကွယ်ရန်အမိန့် ပေးခဲ့ သဖြင့် ( ထိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးနှင့် ) အချင်းများကာ ထိုးကြိတ်ခဲ့ ကြပြီးထိုအမျိူးသား
ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ခင်ပွန်းဖြစ်သူထိုအမျိူးသားမှာ လက်တွင် ဓါးဖြင့် နှစ်ကြိမ်အထိုးခံခဲ့ ရပါတယ်...
သာမန်တွေးယင်တော့ ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်မြင်ကွင်းကြောင့် လိုချင်နှစ်သက်တဲ့ တဏှာတရားဖြစ်ရတယ်လို့ 
ထင်ရပေမယ့် မသိမှုအ၀ိဇ္ဇာကြောင့် တဏှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကိုမသိလေတော့ ဆန်စင်
ရာကျည်ပွေ့ လိုက်သလို မလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို အရေးလုပ်နေမိတော့ တာပါပဲ...
The announcement came days after it was reported thataSaudi man was admitted toahospital afterafight withamember of the committee when he ordered his wife to cover her eyes. The husband was then stabbed twice in the hand.
Posted by Unknown | at 7:07 AM |2comments
Labels: news: bikyamsr.com
Posted by Unknown | at 2:21 AM | 1 comments
အဇာဘိုင်ဂျန်မှ ဆန်းစသော်တာ ( လခြမ်း ) ဟိုတယ်
(အမှန်တစ်ကယ်) ခေတ်မှီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် အဇာဘိုင်ဂျန် နိုင်ငံသည် မီးတောက်မီးညွှန့် သဏ္ဍာန်
မိုးမျှော်တိုက်အပါအ၀င် ပုံစံဆန်းခေတ်လွန်ဟိုတည်များ၊ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်နေခြင်းဖြင့် 
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့ ပိသုကာ လက်ရာအဆောက်အဦးများ၏ ဘုရင်(ခေတ်သစ်အဆောက်အဦးများစွာတည်ရှိ
ပိုင်ဆိုင်သည့် ) ဟုဆိုနိုင်မည့် ဒူဘိုင်းကို အမှီလိုက်ကာ ကျော်တက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်...
ရေနံတွင်းများနှင့် ပါတ်သက်သည့် ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ညစ်ညမ်းမြို့ တော်ဟု အမည်ထင်ရှား
သည့် မြို့ တော် ဘာကု ဟာ ပေါကြွယ်ဝသည့် သဘာဝသယံဇာတများအားကိုးဖြင့် ငွေအလုံးအရင်းမတည်
ကာ ရှေးခေတ်၊ ဆိုဗီယက်ခေတ်လူနေအဆောက်အဦးများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်နေပါတယ်...
ယခုအခါမှာတော့ မြို့ တော်၏ပုံရိပ်အသွင်ဟာ အသစ်တည်ဆောက်ခဲ့ သည့်၊ တည်ဆောက်ပြီးစီးလုဖြစ်နေ
သည့် ရုပ်သံမျှော်စင်၊ မီးတောက်မျှော်စင် အစရှိသည့် တိုက်တာအဆော်ကအဦးများဖြင့် ပြည့် ကြပ်နေပါ
ရေပေါ်က လရိပ်...၂၀၁၅ နှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးမည့် ဆန်းစသော်တာ ဟိုတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ တည်ဆောက်ပြုပြင်မြို့ တော်တစ်ခွင် စီမံကိန်းများကြောင့် ယခင်ညစ်ညမ်းမြို့ တော်မှ ဖြူစင်
သစ်လွင်မြို့ တော်အဖြစ် နာမည်အသစ်ရနေပြီဖြစ်တယ်လို့ စီအင်အင် သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်...
မြို့ တော်အတွင်း အသစ်ဆောက်လုပ်နေသည့် အဆောက်အဦးများဖြင့် သန့် ရှင်းသပ်ရပ်ကာ သစ်လွင်နေ
ပြီးလမ်းသစ်များ၊ ပန်းခြံများ၊ ရထားဂိတ်၊ ကားဂိတ်များ ရေသန့် ပေးဝေမှု၊ အင်တာနက်လိုင်းများ ဆက်
သွယ်နိုင်မှုတော့ ဖြင့် ပြောင်းလဲဆန်းသစ်နေပါတယ်...
နောက်ထပ်ထူးဆန်းအံ့ သြဖွယ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမှာကတော့ကက်စ်ပီယံ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်တည်
ဆောက်နေသည့် အထပ် ၃၃ ခုပါရှိမည့် လခြမ်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိဟိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟု အဆိုပါသတင်းဌာန
အဆိုပါဟိုတယ်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အပြီးသတ်တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုဟိုတယ်နှင့် တစ်ကုမ္မဏီ
တည်းပိုင်ဆိုင်မည့် ဟိုတယ်အသစ်အဖြစ် စတားဝါးစ်ကြယ်တာယာစစ်ပွဲ ရုပ်ရှင်ကားမှ သေမင်းတမန်ကြယ်
နှင့် ပုံစံတူအဖြစ် လပြည့် ဝန်းဟိုတယ်စီမံကိန်းကိုလည်း အဆိုပြုထားပါသေးတယ်...
အကျယ် ၂၂၀ ဧကရှိ ယခင်စက်မှုပစ္စည်းများသိုလှောင်ရာနေရာအားး ရှင်းလင်းကာ ရုံးများ၊ ဟိုတယ်များ၊
လူနေအိမ်များ၊နှင့် ဘာကု မြို့ တော်နေ ပြည်သူ ၅၀၀၀၀ နှင့် အလုပ်သမား၊၀န်ထမ်း ၄၈၀၀၀ တို့ အတွက်
ဆန်းစသော်တာဟိုတယ်ကတော့ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ မြို့ တော်ဘာကု ရဲ့ တည်ဆောက်ပြုပြင်ဆဲ
သိတိထားတော့ အို ဒူဘိုင်း !!!! တောင်ကိုးရီးယား ပိသုကာလက်ရာဒီဇိုင်းများဖြင့် တည်ဆောက်နေသည့်
ခေတ်မှအဆောက်အဦးများဖြင့် ကက်စပီယံပင်လယ်ကမ်းခြေမှ လူနေမှုဘ၀များလည်း ပြောင်း
အဆိုပါလခြမ်းဟိုတယ်စီမံကိန်းအား တောင်ကိုးရီးယား ပိသုကာကုမ္မဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ဟာရင်းပိသုကာ
နှင့် စီမံကိန်း အဖွဲ့ ကနိုင်ငံတစ်ကာမှ ယှဉ်ပြိုင်သည့် တစ်ခြားကုမ္မဏီင်္များအား အနိုင်ယူကာ တည်ဆောက်
ထိုဟိုတယ်ဟာ ဆန်းစသော်တာမြို့ တော်ရှိအထပ် ၃၉ ထပ်မြင့် လခြမ်းအဆောက်အဦးနှင့် အထပ် ၃၈ ထပ်
ရှိ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတော် ရေနံကုမ္မဏီဌာနချူပ်ရုံးအဆောက်အဦးဘေးတွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်...
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံဟာ ခေတ်သစ်ပိသုကာလက်ရာ၊ ဒီဇိုင်းများဖြင့် မွမ်းမံတည်ဆောက်အပ်သော မိုးမျှော်
အဆောက်အဦးများအားဖန်တီးနိုင်မည့် ဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံဖန်တီးနိုင်မည့် စိတ်ဓါတ်စွမ်း
အား၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များရှိနေပါတယ်လို့ ကိုးရီးယားကုမ္မဏီ ဟာရင်း ပိသုကာ ရဲ့ ပြောရေး
ဆိုခွင့် ရှိသူက ရေးသားခဲ့ ပါတယ်...
အနုပညာမြောက်ဒီဇိုင်းများဖြင့် ပုံဖော်ဖန်တီးမည့် စီမံကိန်းများအား အဇာဘိုင်ဂျန်မှ စီးပွားဖက်များက အင်
တိုက်အားတိုက်ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်လျှက်နေတာဟာ၎င်းတို့ နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် အထူးအခွင့် 
အလမ်းပင်ဖြစ်နေပါတယ် လို့ လည်းအဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ် မှဆိုပါတယ်...
သန့် ရှင်းစင်ကြယ် မြို့ တော်စီမံကိန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် တော့ ဒူဘိုင်းကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပေ
မယ့် ၎င်းတို့ နိုင်ငံအား အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့် ရေရှည်တွင်(ပြိုင်ဖက်တစ်ခုအနေဖြင့် ) လျော့ တွက်လို့ မ
ရပဲ ထည့် သွင်းစဉ်းစားလာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသနေပါတယ်...
The next stunning landmark to appear will be the Hotel Crescent,a33-storey down-turned half-moon on the banks of the Caspian Sea, the networked reported.It is to be completed by 2015, andasister project called the Full Moon Hotel - resembling the Death Star from Star Wars - has been proposed.
Posted by Unknown | at 9:16 PM |0comments